Arduino လား ? Raspberry Pi လား ? - Friend Online Store
Arduino လား? Raspberry Pi လား?
Arduino နဲ့ Raspberry Pi ပစ္စည်း နှစ်ခုလုံးဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ ၀ါသနာရှင်၊ အီလက်ထရောနစ် ပညာရပ်ကိုလေ့လာချင်တဲ့သူ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်းကို လေ့လာချင်တဲ့သူ၊ Beginner တွေ နဲ့ DIY လုပ်တဲ့သူတွေ အတွက် လေ့လာသင်ယူလို့ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်း နှစ်မျိုးလုံး အားသာချက်၊ အားနည်းချက် ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ platform လည်းကွဲလို့ Arduino က ပိုကောင်းတယ်၊ Raspberry Pi က ပိုကောင်းတယ် လို့ ပြောဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ပစ္စည်း နှစ်မျိုးလုံးကို DIY အီလက်ထရောနစ်ပရောဂျက်၊ Robotics ပရောဂျက်၊ IoT ပရောဂျက် ၊ Home automation ပရောဂျက် ၊ စိတ်ကူးထဲလာသလို နေရာတော်တော်များများမှာ သုံးလို့ရပြီး၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကြား အရမ်းရေပန်းစားတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Arduino က Microcontroller
Raspberry Pi က Mini computer
Arduino ၀က်ဘ်ဆိုဒ် – www.arduino.cc
Raspberry Pi ၀က်ဘ်ဆိုဒ် – www.raspberrypi.org
Arduino က multitasking လုပ်ဖို့အဆင်မပြေပါ။ Code ကိုတစ်ကြိမ်ချင်းစီသာ Run လိုရပါတယ်။
Raspberry Pi က multitasking အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။
Arduino ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ပရောဂျက်တွေ မှာပိုသုံးကြပါတယ်။
Raspberry Pi ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပရောဂျက်တွေ မှာသုံးပါတယ်။
Arduino ကိုသုံးဖို့ accessories တွေအများကြီးမလိုအပ်ပါ။
Raspberry Pi ကိုသုံးဖို့ သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ accessories တွေမဖြစ်မနေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Arduino က အီလက်ထရောနစ်တွေ၊ ပရိုဂရမ်မင်းတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့သူတွေ၊ ကကြီးရေး ကဆိုတဲ့သူတွေ၊ ကလေး လူကြီး အကုန်လုံး အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် တို့ ပရိုဂရမ်မင်းတို့ ဆိုတာ စားလို့၀ါးလို့ရတဲ့ဟာလား ဆိုတဲ့သူတွေ အတွက် ၀ါသနာပါရင်၊ ၀ါသနာအသစ်တစ်ခုရှာနေရင် စမ်းလေ့လာလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လောက်ထိ အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီး Advanced အရမ်းဖြစ်တဲ့ ပရောဂျက်တွေမှာလည်း အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ DIY ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်တို့ ပရိုဂရမ်မင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်ကစရမှန်းမသိရင် Arduino နဲ့သာ စလိုက်ပါ။
Raspberry Pi က Arduino လောက်မလွယ်ကူပေမဲ့ သူလည်း ကလေးလူကြီးမရွေးအကုန်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Arduino လိုမျိုး DIY အီလက်ထရောနစ် ပရောဂျက်တွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ Pi ကို ကွန်ပျူတာအသေးစားလို့ခေါ်ကြလို့ သမာရိုးကျကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲ အင်တာနက်ဖွင့်သုံးလို့ရမယ်၊ ဂိမ်းတွေဆော့လို့ရမယ်၊ office application ဆော့ဖ်၀ဲတွေသုံးလို့ရမယ်၊အခြားလေ့လာလို့ရတဲ့ အရာများစွာလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုသုံးလို့ရတာက လည်း Pi ရဲ့ ထူးခြားချက်၊ သူ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း တစ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Arduino ရဲ့ Community ကအရမ်းကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Arduino နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပရောဂျက်တွေ၊ tutorial တွေ၊ Video တွေ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေ၊ example code တွေ၊ group တွေ၊ event တွေ အရမ်းများလို့ ပစ္စည်းသုံးရင်အခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့ရင် အဖြေရှာရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
Raspberry Pi ရဲ့ Community ဟာလည်း Arduino လိုပဲ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေ၊ blog တွေ၊ Raspberry Pi Jam Event တွေ၊ လစဥ်ထွက်ရှိတဲ့မဂ္ဂဇင်း Free PDFများစွာရှိပါတယ်။
Arduino မှာရှိတဲ့ Board အမျိုးအစားရွေးချယ်စရာအရမ်းများပါတယ်။ Uno ၊ Nano ၊ Mega ၊ Leonardo ၊ Pro Mini ၊ Pro Micro ၊ Lilypad သာမက အခြားရွေးချယ်စရာ board အမျိုးအစားများစွာရှိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Arduino နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Sensor တွေ၊ Module တွေ၊ Component တွေက အရမ်းများလို့ ပစ္စည်းရှာတာအခက်အခဲသိပ်မရှိပါဘူး။
Raspberry Pi က Arduino လောက် ရွေးစရာ board မများပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ အသစ်အသစ် upgrade လုပ်ပြီးထုတ်တာများပါတယ်။ ဥပမာ Raspberry Pi ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Board ဆိုရင် ၂၀၁၉ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Raspberry Pi4Model B (RAM 1GB, 2GB or 4GB) ပေါ့။ ၂၀၂၀ မှာဆိုရင် Raspberry Pi4Model B ကိုပဲ RAM 8GB ဗာရှင်းထွက်ရှိထားပါတယ်။ 1GB ဗာရှင်းကိုဆက်မထုတ်တော့ပဲ 2GB၊ 4GB နဲ့ 8GB ဗာရှင်းတွေကိုပဲဆက်ထုတ်တော့ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာတော့ Raspberry Pi4Model B+ ထွက်ရင်ထွက်မယ်၊ သို့မဟုတ် Raspberry Pi5လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။